Sandals Royal Bahamian: Zvimwe zvitsva zvekuzorora kwoumbozha
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Sandals Royal Bahamian: Zvimwe zvitsva zvekuzorora kwoumbozha
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Jamaica Nhau • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Sandals Resorts International (SRI) yazivisa nhasi kuwedzerwa kwekuvapo kwemamirioni-emadhora ekugadzirisazve Sandals Royal Bahamian, hotera inohwina mubairo, spa uye chitsuwa chakazvimiririra chiri muNassau, Bahamas, nehurongwa hwekuvhurazve Ndira 27, 2022.
Nzvimbo dzekugara nyowani, chitsuwa chakazvimiririra chakazvimirira, uye zvimwe zvakagadzirirwa kutanga mwaka we2022 kuSandals Royal Bahamian.
Izvozvi zvave kutoitwa kuvandudzwa kwechiratidzo chemurwizi masites uye kugadziridzwa kwemakamuri anopfuura mazana maviri nemasuti.
Kungofumurwa ipfungwa nyowani nyowani, Kokonati Grove, inzvimbo yekuzorora yekutandarira inowedzera kumahombekombe egungwa kusvika pakati peiyo nzvimbo.
Pamusoro peiyo yatove-yakaziviswa iconic rwizi suites uye kugadzirisazve kweanopfuura mazana maviri makamuri nema suites, Sandals Royal Bahamian ichafumura imwe nyowani nyowani pfungwa, Kokonati Grove, nzvimbo yekutandarira yakawedzera iyo inowedzera kumahombekombe egungwa kusvika pakati penzvimbo yekutandarira. Yakaputirwa nemichindwe yekokonati, iyo marongero matsva acharatidza kubatana nekukasira kunzvimbo yekushanyirwa yeCaribbean nemarori ezvakanaka zvekudya, chic, zvigaro zvekuzorora, uye zvisingaenzaniswi zvegungwa. Kufungidzira kwechitsuwa chayo chakazvimirira chega, Sandals Cay, ine marongero ekuvandudzwa eimba yekutandarira uye chiitiko chitsva chegastronomic, ichatsigira zvigadzirwa zvitsva zvezororo. Kuti usapindire pane chiitiko chevaenzi, nzvimbo yekutandarira icharamba yakavharwa panguva yekuvaka uye ichavhurwa mwaka we2022.
"Kufambisa zuva rekuvhura kubva munaNovember 4th chisarudzo chakaoma zvikuru, ”akadaro Sachigaro weSRI, Adam Stewart. "Kunyangwe isu tichigona kuvhurazve nzvimbo zhinji yekutandarira, kudiwa kwepasirese kwezvinhu uye kukanganisika kwekutengesa kuri kunonotsa kugona kwedu kupedzisa zvizere chirongwa. Kuchengeta iyi hotera iri kuputirwa kusvikira yanyatsogadzirira ndicho chinhu chakakodzera kuita. "Tiri munzvimbo ine tarisiro huru uye kana vashanyi vedu vasvika, ichave nzvimbo yeCaribbean yakadzikama uye inotonhorera iyo ichave yakafanira kumirira."
Vashanyi vane kuchengetedza kuSandals Royal Bahamian panguva yekuvharwa kwavo vanozogariswa munzvimbo inowanika yeSandals Resorts nzvimbo yesarudzo yavo kusanganisira Sandals Emerald Bay muGreat Exuma kune vashanyi vanoshuvira kuchengetedza kwavo muBahamas. Sandals Resorts ichatora ese mari yendege yekuchinja.
Sandals® Resorts inopa vanhu vaviri vari murudo zvakanyanya kudanana, Luxury Inosanganisirwa® zororo ruzivo muCaribbean. Iine 15 inoshamisa marongero egungwa muJamaica, Antigua, Saint Lucia, VaBahamas, Barbados, Grenada, uye gumi nematanhatuth nzvimbo inouya kuCuracao Chitubu 2022, Sandals Resorts inopa yakawanda yemhando inclusions kupfuura chero imwe kambani yekutandarira pasi. Siginecha Rudo Nest Butler Suites® yeiyo yekupedzisira mune zvakavanzika uye sevhisi; vatengesi vakadzidziswa neGuild of Professional English Butlers; iyo Red Lane Spa®; 5-Nyeredzi Global Gourmet ™ yekudyira, kuve nechokwadi chepamusoro-pasherufu doro, premium waini, uye gourmet yakasarudzika maresitorendi; Aqua Nzvimbo nehunyanzvi PADI® chitupa uye kudzidziswa; inokurumidza Wi-Fi kubva kumahombekombe kuenda kuimba yekurara uye Sandals Yakasarudzika Michato ese eSandals Resorts anosarudzika. Sandals Resorts inovimbisa vaenzi runyararo rwepfungwa kubva pakusvika kusvika pakuenda ne Sandals Platinum Maprotocol eUtsanana, matanho akasimudzirwa nekambani ehutano uye ekuchengetedza akagadzirirwa kupa vashanyi chivimbo chakazara pavanenge vachienda kuzororo kuCaribbean. Sandals Resorts chikamu chemhuri dzine dzimba Sandals Resorts International (SRI), yakavambwa nemushakabvu Gordon "Butch" Stewart, iyo inosanganisira Beaches Resorts uye ndiyo yeCaribbean inotungamira ese-anosanganisira resort kambani. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo Sandals Resorts Luxury Inosanganisirwa® mutsauko, shanya www.mumusi.com.
Tropical Dutu Elsa inopfuura padyo neFlorida Keys ine ...
Hotera yepamusoro yepasi rose inovhura muShanghai, China
Canada kuvhura miganhu kune vakazara vafambi